पाेखरामा प्रचण्ड गर्जन : जबज छोड्ने ओली हुन् | eAdarsha.com
पाेखरामा प्रचण्ड गर्जन : जबज छोड्ने ओली हुन्
पोखरा । नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यागेको आरोप लगाएका छन् । पार्टी एकीकरणको समयमा सबैभन्दा पहिले समाजवादउन्मुख जनताको जनवादमा हस्ताक्षर गरेर ओलीले जवज परित्याग गरेको प्रचण्डको आरोप छ ।
‘मैले प्रत्यक्ष हेरेको छु । जवज परित्याग गर्ने माधव नेपाल होइन, केपी ओली नै हो । मदन भण्डारीको लाइन छोड्ने केपी ओली हो । म आधिकारिकरुपले, प्रमाणीत रुपले र दृढताका साथ भन्न सक्छु,’ उनले भने, ‘पार्टी एकीकरण समयमा जनताको जनवाद र बहुदलीय जनवादमा छलफल भयो । माधवजीले कुनै न कुनै हिसाबले राख्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । केपी ओली र म बसेर छलफल गर्दा जवज र मदन भण्डारीलाई छोडेर समाजवादउन्मुख जनताको जनवादमा सबैभन्दा पहिले हस्ताक्षर गर्ने ओली नै हुन् ।’
ओलीले प्रधानमन्त्री पाउनमात्रै राजनीतिक सौदावाजी चलाएको उनको तर्क छ । ‘पार्टीभित्रको विवाद देखाएर संसद भंग गर्न मिल्छ ? चुनौती दिएर भन्छु, उहाँ खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ ? हास्यव्यङ्ग्य गरेर, मान्छेलाई प्रहसन गरेर उल्लु बनाउँछु भन्ने ठान्नुभएको छ ? हजारौंको त्याग र तपस्यालाई ठट्टा ठान्नुभएको छ ? जनतालाई भेँडा ठान्नुभएको छ ? तपाईं हो गणतन्त्र सम्भव छैन भन्ने, हामी होइन,’ ओलीलाई प्रचण्डले भने । उनले हालका भेला र प्रशिक्षण जीवनमरणको संघर्षका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘भेला, प्रशिक्षण, कुनै प्रहसन होइन । हास्यव्यङ्ग्य होइन,’ ओलीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै उनले भने, ‘विचार विमर्श गर्न जुटेका हौं । हाम्रा लागि जीवनमरणको संघर्ष सँग यो सम्बन्धित छ ।’
उनले आफै संस्थापन पक्ष भएको दाबी दोहो¥याए । ‘निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष गर्छ भन्ने विश्वास लिएर आएका छौं । नेकपा हाम्रै हुन्छ, सूर्य चिह्न हाम्रै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दुनियाँका कुनै तागतले त्यसलाई हामीबाट खोस्न सक्दैन । खोस्यो भने आँधीहुरी बतास ल्याउँछौं ।’ माओवादी आन्दोलनमा लागेकाले ओली समूहलाई समर्थन गरेको भन्दै उनले धेरै दिन टिक्न नसक्ने बताए । उनले आफुमाथी बढी प्रहार भएको सुनाए । माधव नेपाल ओलीभन्दा हजार गुणा क्रान्तिकारी र इमानदार भएको बताए । यस्तै, उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसार नै फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहकै अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चम्किलो सूर्य संस्थापन पार्टीसँगै रहने बताए । २०४८ सालमा आफू निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक हुँदा सूर्य चिह्न आफैले ल्याएको भन्दै त्यो अरुले खोस्न नसक्ने उनको दाबी छ । ‘अहिलेको सूर्य चिह्न हाम्रो हो । यो अरुले लान सक्दैन,’ उनले भने, ‘अब ओलीले अस्ताउँदो सूर्य लिनुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन ।’ केपी ओलीको एकलकाटे शैलीका कारण पार्टी कमजोर बनेको नेपालको आरोप छ । ‘वहाँले शक्ति केन्द्रिकरण गर्नुभयो । केपी ओलीको पुरानै प्रवृत्ति हो । एकलकाटे प्रवृत्ति हो । गुटवादी प्रवृत्ति हो । त्यही प्रवृत्ति झाँगिदै गयो । एकताको प्रक्रियामा देखिन थाल्यो,’ नेपालले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूहलाई उनले फाउन्डेसनको टीका लगाइदिएका छन् । उनले ओलीमा कम्युनिष्ट निष्ठा नरहेको आरोपसमेत लगाए ।
देश उखान टुक्काले नबन्ने भन्दै नेपालले ओलीसँग समाज रुपान्तरणको स्पष्ट खाका नभएको बताए । ‘पार्टी चलाउनु छैन । आन्दोलन हाँक्नु छैन । समाजको रुपान्तरण गर्नु छैन । त्यसो हुनाले वहाँबाट देशको हित र कल्याण हुन्छ भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ,’ उनले थपे, ‘उखान टुक्काले देश बन्दैन ।’
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले परिवर्तन र संविधानमाथि आक्रमण गरेको बताए । ‘संसद विघटन यो असंवैधानिकमात्रै होइन, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी र निरंकुश छ । त्यस विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं,’ उनले भने, ‘ओलीले परिवर्तनमाथि आक्रमण गर्नुभएको छ । संविधानको उल्लंघन गर्नुभएको छ ।’ प्रचण्ड नेपाल समूहका गण्डकी इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेलले चुनावको लागि ओलीले दिएको चुनौती स्वीकार्ने बताए । ‘केपी ओलीले चुनौती दिएका छन् । यो चुनौती स्वीकार छ । २ वर्षभित्र सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनाउने छौं,’ उनले भने, ‘दुईचार वटा वडा जितेर देखाउनुस्, मेरो चुनौती छ ।’
भेलामा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट अगुवा नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए ।